မေတ္တာတရားနဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်ပြီး ပြည်သူလူထု အချင်းချင်း အဖိုးမဖြတ် နိုင်အောင် စိတ်ထားလှ ကြောင်းကို ပြောပြ လာတဲ့ ယွန်း ယွန်း…. – Shwe Naung
မေတ္တာတရားနဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်ပြီး ပြည်သူလူထု အချင်းချင်း အဖိုးမဖြတ် နိုင်အောင် စိတ်ထားလှ ကြောင်းကို ပြောပြ လာတဲ့ ယွန်း ယွန်း….
ချစ် လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ…..သရုပ်ဆောင် ထူးချွန်တဲ့ အနုပညာရှင် တွေထဲက ကလေး သရုပ်ဆောင် အဖြစ် ပရိသတ်တွေ ရင်ထဲကို ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ သူလေးကတော့ ယွန်းယွန်း ပဲဖြစ် ပါတယ်။
သူမ ကတော့ ငယ်စဉ် ကတည်း ကနေ အရွယ်ရောက် ထိတိုင်အောင် အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင် နေတာ ဖြစ်ပြီး ဗီဒီယို ဇာတ်ကား တွေ အများအပြား ရိုက်ကူးခဲ့ကာ
အနုပညာ မှတ်တိုင် အဖြစ် ကလေး သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ထူးချွန် ဆုကိုပါ ဆွတ်ခူးရရှိ ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မင်းသမီး ချောလေး ဖြစ်ပါ တယ်နော်..။
ယွန်းယွန်း ကတော့ လူငယ်ပီပီ သွက်လက် ထက်မြက် သူလေး ဖြစ်ကာ လတ်တလောမှာ ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ မြန်မာပြည် အခြေအနေ တစ်ရပ်ကြောင့် ပြည်သူ လူထုနဲ့ အတူ ရဲဝင့်စွာ ရပ် တည်ကာ လမ်းမပေါ် ထွက်ကာ ပါဝင် လှုပ်ရှားမှု တွေကို လုပ်ဆောင်နေတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့ညက ဆိုရင်တော့ ယွန်းယွန်းက “အရေးတော်ပုံကြီး အောင်မြင်သွား တဲ့အခါ အချင်းချင်းမ မေ့ကြရအောင်.. ပြောစရာ မလိုပဲ စည်းလုံးခဲ့ တာတွေ,
ပြည်သူ အချင်းချင်းတူ တာတောင် အနစ်နာခံ ပေးချင်တဲ့စိတ်တွေ, အချင်းချင်း ဖေးမခဲ့တဲ့ မေတ္တာ တရားတွေက…ရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်ပြီး ရင်နာစရာ ကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက် တွေကြားကနေ ပြန်မြင် ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အဖိုးမ ဖြတ်နိုင်တဲ့ စိတ်ထား လေးတွေပါပဲ..✨
ရက်ရှည် လာတာနဲ့အမျှ ကြုံရတဲ့ သင်ခန်းစာ ပေါ်မူတည်ပြီး ဉာဏ်တွေ အမျိုးမျိုးထုတ် သုံးလာကြတယ်, လူမနည်းသွားတဲ့အပြင်တစ်မြို့နဲ့တစ်မြို့အားပေးပြီး သပိတ်စစ် ကြောင်းကိုနေ့စဉ်အောင် မြင်အောင်ကြိုးစားကြတယ်,
တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ အလှူရှင် တွေလဲပိုများလာတယ်, Profession အမျိုးမျိုးက နေပြီးတော့အင်အားတွေ ထွက်ပြတော့ ပြည်သူတွေအားလုံးက တစ်သားထဲ လို့ခံစားလာရတယ်,
ဂုဏ်ယူစရာ လုပ်ရပ်တွေ, ကမ္ဘာကို မြင်အောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ သတ္တိတွေ.. တွေးကြည့်ရင် တကယ်ကို အများကြီးမှ အများကြီးပါပဲ 🤍💪🏻ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေ နဲ့ အောင်မြင် မှုကသာ အထိုက်တန်ဆုံးပါ.. ပိုယုံ ကြည်လာမိတယ်
ဒါအဆုံး သတ်တိုက်ပွဲ ပဲဆိုတာကို ✊🏻🕊”ဆိုတဲ့ အား ဖြစ်စေမယ့် စာလေးကို လူမူကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက်တွင် ရေးသာ းဖော်ပြလာတာ ဖြစ်တာ ကြောင့် ပရိသတ် တွေ အတွက် ပြန်လည်မျှ ဝေပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
ဖတ်ရှူ့ပေးကြ တဲ့ပရိတ်သတ် ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
အစာ မကျွေးဖြစ် တာကြာလို့ အစာ သွား ကျွေးရင်း ပီတိဖြစ် ခဲ့ရတဲ့ ဘေဘီမောင်…..
အပိုလိုမရှိ လူမှားသွား လောက်အောင် ဘော်ဒီ အမိုက်စား အလှတွေနဲ့ ပုရိသ တွေရဲ့အသဲကို လှုပ်ခက်စေ တဲ့ “အိချောပို”….
ထပ်ခါထပ်ခါ သတင်းမှားတွေ ထွက်ပေါ်နေ တဲ့အပေါ် ပိုပို နဲ့ပါတ်သက် ပြီထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့ခဲ့တဲ့ မိသားစုဝင် တစ်ဦးရဲ့ ဖြေရှင်းချက်….